I-Indonesia ihlotshaniswa ne-exotic yasempumalanga, egcwele amasiko namasiko ajwayelekile . Lapho uvakashela izwe, isivakashi akudingeki sithobele yonke imithetho, kodwa kubalulekile ukwazi ngabo. Imithetho yase-Indonesia cishe ayifani nemithetho yamazwe angomakhelwane, kodwa kufanelekile ukucabangela ukuthi 80% yabakhileyo bathi bangamaSulumane, futhi lokhu kwaba nethonya elikhulu kubo.
Yini okufanele izivakashi zikwazi uma zivakashela i-Indonesia?
Ukuya eholidini, udinga okungenani isiqondiso esincane kwimithetho yezwe. Okungenani - ukwazi lezo zenzo zomthetho eziphathelene nezivakashi, ukuze ungangeni esimweni esihlazayo futhi ungazilimazi kokubili ngokomzimba nangokwezimali. Ngezomthetho wase-Indonesia, uzobe usuvele usesikhumulweni sezindiza :
Izakhamizi zaseRussia zenza i- visa lapho zifika, futhi zigcwalise ikhadi lokufuduka, okumele ligcinwe kulo lonke ukuhlala kuleli zwe futhi linikezwe lapho lihamba khona.
Imithwalo oyibonisayo ekuhlolweni kwakho. Ungangenisa imali ngaphandle kwemingcele, ne-rupee yase-Indonesian - ngenani elingaphezu kwama-50 ayizinkulungwane, futhi kufanele libike.
Ukungenisa utshwala akungaphezu kwama-2 amalitha, inani legwayi akufanele lidlule izingcezu ezingu-200. Ukungenisa izikhali, izithombe zobulili ezingcolile, ngaphezu kwalokho, umfaniswano wezempi, izincwadi zomuthi kanye nezithelo zaseShayina azivunyelwe.
Kuphoqelekile ukuba ubhalise ividiyo ephathekayo noma ikhamera ngeziphathimandla.
Imigomo yokuhlala kuleli lizwe lilinganiselwe futhi lichazwe kuphasipoti, ayikwazi ukwephulwa. Ukuze ukwandise, udinga uxhumane nezinsizakalo zombusazwe.
Akuvunyelwe ukungenisa noma yiziphi izinhlobo zezidakamizwa. Nakuba zivame kakhulu kuleli zwe, akufanele zitholakale: izigebengu ezihlobene nezidakamizwa, izijeziso ezinzima kakhulu (kuze kufike isigwebo sokufa).
Ngaphansi kokuvinjelwa, ukuthekeliswa kwezinhlobo ezingavamile zezilwane nezinyoni ezibhalwe eNcwadini Ebomvu kanye nezilwane zazo ezigxotshiwe.
Indawo yokuhlala yase-Indonesia inokwenzeka kuphela ezindlini zokugibela kanye namahhotela anamalayisense wombuso. Abanikazi balezi zikhungo kumele babhalise izivakashi esiteshini samaphoyisa nakanjani.
Ukubhema ezindaweni zomphakathi akuvumelekile, lokhu kusebenza emahhovisi, ezindizeni zezindiza, ezikoleni, emahoreni, ezindaweni zokudlela, ezokuthutha zomphakathi kanye nemigwaqo. Umenzi wobugebengu angathola isigwebo sokuboshwa ezinyangeni ezingu-6. noma ukhokhe imali engaba ngu-$ 5,500.
Imithetho yokuziphatha engejwayelekile
E-Indonesia, kunezimiso ezithile ukuthi wonke umuntu kufanele alandele ngaphandle kokuhlukile, kufaka phakathi izivakashi. Nakhu okubaluleke kakhulu kubo:
Inhloko ibhekwa njengengxenye engcwele yomzimba e-Indonesia, ngoba umuntu akasoze ayithinte ikhanda langaphandle;
eme eduze komuntu ohlezi phansi kukhona ukwephulwa kwemithetho yangaphakathi-yabantu yase-Indonesia;
ukubonakaliswa kwemizwa enobudlova kulahlwa: ngaphansi kokuvinjelwa hhayi nje ukumanga nje nokumbumbuluza, kodwa ngisho nokubamba izandla kuthathwa njengokungahambi kahle futhi kukhubekisa abanye;
ukubusa kwesandla sokunene - ngakwesobunxele e-Indonesia kubhekwa njengokungcola, ngakho-ke thatha okuthile, ukukhonza nokudla ukudla kuphela "ngokuhlanzekile", ngakwesokunene. Uma udinga ukucacisa okuthile, bese ucindezela u-elbow eceleni bese usebenzisa isithupha sesandla sokunene. Ngokuqondene nezinyawo, izinyawo zabase-Indonesia zibhekwa njengezingcwele;
ukubukeka akubalulekile nakancane ezweni lamaSulumane. Kulabo besifazane, inkolo nemithetho ye-Indonesia ayivumeli ukugqoka iziketi ezifushane, izingubo ezivulekile kanye ne-decollete ejulile emphakathini. Izingubo ezinjalo zivunyelwe kuphela ogwini . Kodwa ngendlala, awukwazi ukushisa ilanga. Amadoda ngaphandle kwehembe noma ihembe ukuze ahambe azungeze umuzi, futhi, akufanelekile;
lapho uvakashela umosikisi, susa izicathulo zakho ngaphambi kokungena. Owesifazane angangena kuphela ngekhanda lakhe limbozwe futhi egqoke izingubo ezigcwele.
Amathiphu awusizo kwabavakashi
Ukuya e-Indonesia, qaphela amaphuzu alandelayo:
Ukuphepha . Gcina ithrekhi yezinto zakho, ikakhulukazi ezindaweni ezinabantu abaningi, ngoba eziningi ze-pickpockets.
Imithetho yokudla. Awukwazi ukuphuza amanzi emthonjeni ngenxa yobungozi bokubamba i-E. coli, kuphela ngamabhodlela. Ngokuqondene nokudla, ungayithengi ezimakethe noma emigwaqweni - kuyingozi. Abaningi base-Indonesia bajabule ukudla izithelo zeDrian, okufana nekhrimu namantongomane ukunambitha, kodwa iphunga layo liyingozi kakhulu - njengengxube yegalikhi, ukuthungwa kwemifula kanye nenhlanzi ebolile, ngakho-ke ezindaweni ezivamile akuvunyelwe.
Ezempilo. Ngaphambi kokuya e-Indonesia, kunconywa ukugoma okulandelayo: kusuka e-rabies, nge-hepatitis A ne-B, i-diphtheria, i-malaria, i-tetanus ne-yellow fever. Umshuwalense wezokwelapha awuhlinzekiwe lapha, kodwa uma kunesidingo, udokotela angabizwa.
Izingcaphuno ezithakazelisayo ezivela emithethweni yase-Indonesia
Wonke amazwe emhlabeni ahlukile futhi ahlukile. Lokhu kusebenza futhi emithethweni enqunyiwe kuyo. Nazi ezinye izinto ezingavamile futhi eziningi kithi ezicacile ezivela emithethweni yase-Indonesia:
Uma owezizwe ebukeka emehlweni akho imizuzwana engaphezu kwengu-20, uvunyelwe ukumshaya;
Ubulili phakathi kwabantu abangashadile abukho emthethweni, futhi bubhekene nokuboshwa iminyaka engaba ngu-5;
umsebenzi wokushaya indlwabu kanye nobulili endaweni yomphakathi ujeziswa yi-decapitation;
e-Indonesia, ukufa ngoLwesine kuvinjelwe;
Uma uthisha ehlambalaze abazali bakhe, unelungelo lokulishisa;
ukudla ukudla, awukwazi ukukhanya.
Imifula yaseNingizimu Korea
I-Cambodia - ukudilika
Yini okufanele ukuyilethe eNingizimu Korea?
Maldives - ikhishi
Izikhumulo zezindiza zaseCambodia
Korea - Ukuphepha
Izindawo zokuhlala zaseLaos
Maldives - sezulu ngenyanga
I-closet ngaphansi kwezitebhisi
Ukubuyiselwa kombono ngendlela ye-Zhdanov
UVincent Cassel waya embukisweni wezemidlalo eParis enomngane omncane uTina Kunaki
Imifino shish kebab
Umlingisi waseMelika u-Julia Stiles uzokhipha ngokushesha isimo sesibhakela
Uthini umshanelo uphupha?
I-periarthritis yedolo elihlangene
I-stylish yokwenza udonga ngezithombe?
I-Roller iyimpumputhe kumafasitela e-balcony
Vyacheslav Zaitsev - biography
Ama-insecticide wesenzo esikhulu
Ukukhuluma ngenhlanhla yaseNdiya
Ukunwebisa kwe-Gel ngezifomu
I-Torder Border for Bathroom
Ukuvulwa kwamantombazane - izizathu
Midokalm - injection
I-La Marina Avenue
Ungondla kanjani i-pug?
Yenza ukwakheka kwesithombe sebusika
Ngenxa kaKelly Clarkson, umyeni wakhe uBrandon Blackstock wenza i-vasectomy